USB က Silicon လက်ပတ်, Hi-speed USB2.0 USB Silicone Wristband, Hi-speed USB3.0 USB Silicone Wristband, USB မှ Flash ကို Disk ကိုလက်ပတ်, ဦး Disk ကိုလက်ပတ်, USB Wristband, USB Soft Silicone Wristband
USB က Silicon လက်ပတ်, USB မှ Flash ကို Disk ကိုလက်ပတ်, ဦး Disk ကိုလက်ပတ်
လက်ပတ် / လက်ကောက် Hi-speed USB2.0 USB Silicone Wristband, Hi-speed USB3.0 USB Silicone Wristband, ဦး Disk ကိုလက်ပတ်, USB မှ Flash ကို Disk ကိုလက်ပတ်, USB က Silicon လက်ပတ်, USB Soft Silicone Wristband, USB Wristband
စွမ်းဆောင်ရည်: 64ကို MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB Optional
ဒေတာကိုစာဖတ်မြန်နှုန်း: 5-15ကို MB / S က
ဒေတာကိုစာအရေးအသားမြန်နှုန်း: 2-10ကို MB / S က (ကွန်ပျူတာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ဆက်စပ်သော)
ဒေတာကိုသိုလှောင်မှု: ထက်ပိုပြီး 10 နှစ်ပေါင်း
အရွယ်: 215X18X8mm, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
Colorful Wristband U disk is worn on the wrist, 100% soft silicone material, လုံခွုံသော, non-toxic, does not irritate the skin; စတိုင်, generous, အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့. Stylish men and women love to wear brightly coloured decorations on their wrists.
USB silicone bracelet can be customized foravariety of colors, printing or laser engraving Patterns, လိုဂို, serial number and so on.
အကြီးစားသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်, အနိမ့်သောစျေးနှုန်း, and high cost performance.
Fast data transfer speed - high-speed USB removable storage disk, no-drive, Plug and Play, no power, အသုံးပြုရလွယ်ကူ.
Durable - Data is stored for more than 10 နှစ်ပေါင်း, ထက်ပိုပြီး 1 million read and write, magnetic, seismic, moisture, high and low temperature, resistant to hitting.
I am interested in your product USB Silicone Wristband, USB မှ Flash ကို Disk ကိုလက်ပတ်, ဦး Disk ကိုလက်ပတ်
prev: RFID ချွေးပေါင်းအိမ်ဗာ waterproof လက်ပတ်, RFID waterproof လက် Catenary
နောက်တစ်ခု: RFID သံမဏိစာရွက်လက်ပတ်, PaPaPa Silicon လက်ပတ် Circles, silicone PaPaPa Circles